ရက်ပေါင်း ၂၀၀ - မျှဝေရန်အကြံပြုချက်များ ၁၀ ခု - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
ရက်ပေါင်း ၂၀၀ - မျှဝေရန်အကြံပြုချက်ဆယ်ခု
အမှုအရာ (အကြံပေးချက်များ) ဝေမျှဖို့အနည်းငယ် 200 ရက်ပေါင်း !! (self.NoFap)
by clone_panvel200 ရက်ပတ်လုံး
ရက်ပေါင်း ၂၀၀ NOFAP ရိုးရိုးရှင်းရှင်းခံစားချက်သည်အံ့ feeling စရာကောင်းသည်။ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးသေးသကဲ့သို့ကန ဦး ရည်မှန်းချက်မှာရက်ပေါင်း ၅၀ ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘ ၀ တွင်ကွဲပြားခြားနားပြီးအံ့သြဖွယ်ရာများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် ယောက်ျားတွေလည်းမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
၁) တရားရှုမှတ်ခြင်း - (၂၀) ​​ရက်တွင်တရားအားထုတ်ခြင်း၊ တစ်နာရီလျှင် (၁၅) မိနစ်ကြာနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အတူတူသွားခဲ့ပြီး၊ ထိုနေ့ရက်များအတွက်ဘာအပြောင်းအလဲမှမရှိခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်စိတ်ရှုပ်ထွေးသောအချိန်ဇယားကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဒါကကျွန်တော့်ကိုမကူညီဘူးလို့ထင်ပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရမယ်၊ ငါဘာဝနာကိုပြန်ပြောင်းရမယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ဘာဝနာကိုပြန်စလေ့လာပြီးအတွေ့အကြုံက "ကြည်နူးဖွယ်" ဖြစ်တယ်။ သင်မေ့သွားသည့်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေသည့်သတိပေးချက်များပေးရန်အတွက်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှအက်ပလီကေးရှင်းကိုယောက်ျားများက download လုပ်ရန်။
၂။ ရည်မှန်းချက်တိုများ - ကန ဦး ရက်များတွင်ရက်ပေါင်း ၃၀ သို့မဟုတ်ရက် ၆၀ ကဲ့သို့အတိုပစ်မှတ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကန ဦး ရက်များ၌ရက်ပေါင်း2(ကဲ့သို့ရက်ပေါင်း ၉၀) သည်အလွန်ရက်စက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မဖြစ်မနေ PMO မဖြစ်စေရ၊ porn မှဝေးဝေးရှောင်ပါ၊
3) ဖတ်ရန်: မဂ္ဂဇင်းများ, ဆောင်းပါးများ, စာအုပ်တွေနဲ့သင့်အသိပညာတိုးပွားစေဖို့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ကလေ့လာမှုများသို့မဟုတ်အလုပ်၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်သမျှသောကြောင့်ပစ္စည်းမှနေ့စဉ်သတင်းစာထဲကနေဖတ်နေ၏အလေ့အထလုပ်ပါ။
4) စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဦးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင် / မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ပါတ်: ကျွန်တော်တို့ဟာ porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချည်းနှီးသက်သက်သရုပ်ဆောင်, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားတွေသင်လိမ့်မည်တစ်ဦးချင်းစီ၏စစ်မှန်သောဘဝအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းအင်တာနက်န်းကျင်ရုပ်ရှင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှာတှေ့နိုငျဖန်ဆင်းထင်ဘယ်တော့မှကြောင်း PMOing စဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုဒါကြောင့်ကန့်သတ်ခဲ့သည် ကျိန်းသေသွားစောင့်ရှောက်ဖို့သငျသညျလာအောင်နှိုးဆွ။
5) လေ့ကျင့်ခန်း: ငါနေ့တိုင်းလည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သင့်စိတ်ထဲပေါ်အံ့သြဖွယ်ရလာဒ်များပြသနိုင်ပါတယ်စသည်တို့ကြောင့်နာရီအားကစားရုံထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်သွားနှင့်စုပ်ဟုဒါပေမဲ့တွန်းအားပေး ups နဲ့တူပင်ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခန်း, စက်ဘီးစီးခြင်း, ရွရွပြေး, ရေကူးမဟုတ်ဘူး။
ကြှနျတေျာ့အမွငျ fapstraunauts ၏အနည်းငယ်ဒုတိယမပြုစေခြင်းငှါငါမူကားသူတို့သည်သင့်ခံစားခဲ့ကြရသည်အရာကိုသိမပြုစေခြင်းငှါအဖြစ်သာသင်၏မိတ်ဆွေများသင်တို့ကို အကြောင်းပြု. ပျော်စရာပြီးမှဖို့အခွင့်အလမ်းပေးဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုထုတ်ဖော်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ထင်: 6) သင် NOFAP သို့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ဖို့မကြိုးစားပါ အတိအကျ NOFAP သည်, ဒါကြောင့်တိတ်တဆိတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားပေမယ့်အမြဲတမ်း NOFAP join ဖို့လိုအပ်ချက်များကိုခံစားရသူကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှလက်ကူညီပေးနေချေးငှားရမည်။
7) တဦးတည်းလူစိမ်းကိုကူညီပါ: သင်ရခံစားအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်သီတင်းပတ်အတွင်းတစ်ချိန်ကအချို့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့သို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားတို့ကိုအခနျးကိုကူညီဖို့ကြိုးစားပါ။
အင်တာနက်အထောက်အကူပြုဖြစ်ပါသည်သို့သော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောသူတွေနဲ့အတူ socializing ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်သော်လည်းအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှလျော့နည်းအဖြစ်အင်တာနက်နှင့်လူမှုမီဒီယာကိုခုတ်လှဲရန်ကြိုးစားပါ: 8) အင်တာနက်နှင့်လူမှုမီဒီယာကိုဆင်းဖြတ်ယူပါ။
9) မိသားစုအချိန်: ငါ့ကိုအညီသူတို့အားယောက်ျားတွေသင်အရှိဆုံးကိုချစ်ပေမယ့်သူတို့ကပြသဘယ်တော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့မိဘများနှင့်မောင်နှမနဲ့အတူအဖြစ်အချိန်အများကြီးဖြုန်းဖို့ကြိုးစားပါ🙂
၁၀။ အကောင်းမြင်ပါ - အနာဂတ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုများအားလုံးကိုဖယ်ထားပါ။ သင့်ဘဝကိုအပြုသဘောဖြင့်နေ့စဉ်အသက်ရှင်ပါ။